Mudlarking muLondon paThames
Kuchengeta Pfuma Pamwe Nerwizi rwa Thames
London inogona kunge isisina gungwa asi Rwizi Thames runoyerera nepamusoro peguta uye sezvo iri rwizi rudhiri, mabhangi ehova anoonekwa zuva nezuva.
Muzana remakore rechi18 ne1900, varombo vakawanda muLondon vaitsvaga mhirizhonga pamigwagwa iyo yakanga yanyura mumvura nemotokari yakanga yawa kubva muchikepe ichi kutengesa. Mudlark yaiva basa rinozivikanwa kusvikira pakutanga kwezana remakore rechi20 asi kudengenyeka kwemazuva ano kwakafanana nekukanda kana kuchengeta pfuma kune avo vanofarira nhoroondo yeLondon.
The Thames ikozvino imwe yemvura yakachena kudhura nzizi munyika, asi yakagara ichionekwa semarara eLondon. Thames matope ine anaerobic (isina oxygen) uye inochengetedza chero zvayo inoshandisa iyo inokonzera nzvimbo yemakiromita 95 kubva mumvura yeThames imwe yenzvimbo dzakapfuma yezvokuchera matongo munyika.
Mudlarking ndiyo yakaenzana nemuguta rekucheka (kutarisa pamhenderekedzo ye "pfuma" yakashambidzwa negungwa). Kune vanonyanya kuda mudlarking vanofarira avo vanyoresa uye vane zvigadzirwa zvose uye pane vanochera matembereologist uye isu tose tinofadzwa neRondon yekare yekuratidzwa pane futire zuva rega rega.
Ndinoda Chiremba Here?
Kubva munaSeptember 2016, reisense inofanirwa kutsvaga chero chinhu chiri pamusango, kunyange iwe uri kutarisa, usina chinangwa chokubata kana kubvisa chero chinhu.
Iwe unogona kushanda kuPort yeLondon Authority (PLA) yepaisensi uye vanogona kupa mazano akajeka pane zvaunotenderwa kuita uye kupi.
Ndinogona Kuita Zvinhu Zvose Zvandinowana Here?
Zvakakosha kuti chero chinhu chipi zvacho chinowanikwa pamapuranga anokwanisa kuva chekucherwa kwezvokuchera matongo anonzi kuMusamende yeLondon kuitira kuti zvingave kuti munhu wese anogona kubatsirwa kubva pane zvaakawana. Kuburikidza nechirongwa ichi, mudlarks vakabatsira kuvaka dare risingaenzaniswi rehupenyu hwezuva nezuva mumvura yapakati.
Kana iwe uchida kuunza zvitsva zvako kumba, iwe uchada kuwana chikwata chekutumira kunze.
Iyi ndiyo nzvimbo yemuguta kuitira kuti iwe unowanzowana zvinhu zvezuva nezuva izvo vanhu vakarasa kunze kwehari, mabhatani uye zvishandiso. Izvo zvisingambofungidziri iwe uchawana bhegi remadhamondi kana saga regoridhe.
Chinhu chinonyanya kuwanikwa kuti uwane chirwere chevhu - kazhinji chinoputsika uye kazhinji chinogara pasi. Idzi dzaiva kusvuta mabhazi uye dzakatengeswa kusati dzazadzwa nefodya zvakare, kunyange zvazvo dzaigona kushandiswa zvakare, dzaiwanzosiyiwa kunze, kunyanya nevashandi vekudzivirira zvinotsanangura kuti sei kune vakawanda muhova. Kunyange zvazvo izvi zvinonzwika zvakaenzana ne "cigarette butt" yemazuva ano uye kwete kufadza, inodzokera kumashure kwezana remakore rechi16.
Yeuka kutora zvikwama zvepurasitiki pamwe newe kune zvaunowana uye ushambidze zvose mumvura yakachena usati watendera vamwe kuti vaite.
Nyaya inonyanya kukosha yaunoda kuti mudlarking ive yakachengeteka ndiyo matafura ezuva nezuva. IThames inomuka uye inowira nemamita anopfuura manomwe kaviri zuva rimwe nerimwe sezvo maruva achisvika uye kunze uye mvura inotonhora.
Chengetedza mapurisa ako apo rwizi runomhanya nekukurumidza uye rune simba rinoshamisa. Yeuka matanho anokwanisa kuva anotsvedza kuitira kuti upinde nehanya.
Shamba maoko ako kana kupfeka magirafu akadzivirirwa sezvo nzvimbo yacho isiri dope chete asi kune ngozi yekutengesa chirwere cheWeil (kupararira nekirati mumugungwa) pamwe nekushambidzwa kwemhepo mumhepo inenge ichiri kuitika mumvura. Utachiwana kazhinji kuburikidza nokucheka paganda kana nemaziso, muromo kana mumhino. Zano rezvechiremba rinofanira kutsvaga pakarepo kana zvirwere zvakaipa zvichisangana mushure mokushanyira nyika, zvikurukuru "zvirwere-furu" zviratidzo, kureva kupisa, kupopota, nezvimwe. Zvose pane zvose, chenjerera kuti usabata maziso ako kana chiso pamberi pekuti maoko ako akachena. Anoshamba-bhakitiriya kushambidza anogona kubatsira usati wapa maoko iwayo zvakanaka.
Kupfeka zvipfeko zvakasimba sezvo zvinogona kuva dope uye zvinotsvedza munzvimbo.
Iva wakangwara, uye usapinda mudlarking iwe pachako.
Pakupedzisira, cherechedza kuti kana iwe ukaenda kune foreshore, unodaro iwe pachako panjodzi yako uye unofanira kutora mutoro wemunhu chero upi zvake waunoita naye.
Mukuwedzera kumvura nemvura inotaurwa pamusoro apa, pane njodzi dzinosanganisira mvura yakasvibirira yakaoma, girasi rakaputsika, hypodermic sindano uye kushamba kubva mumidziyo.
Iwe unogona kuedza pfuma yekuvhima mune dzimwe nzvimbo dzepamusoro dziri pakati peLondon. Iwe unogona kudurura pasi peMillennium Bridge kunze kweTate Modern muSouth Bank kana kuenda kumhenderekedzo yekuchamhembe, pedyo neSt Paul's Cathedral . Kunze kweGabriel's Wharf kunogona kuva nzvimbo inofadza kuongorora 'gungwa' uye nzvimbo dzakapoteredza Southwark Bridge uye Blackfriars Bridge kumucheto kuchamhembe zvakakodzera kuongorora zvakare. Iwe unogonawo kutarisa kwakapoteredza Canary Wharf kana uri kushanyira Museum of London Docklands .
Kana iwe uchifarira mvura yeLondon, unogona kufara kushanya kuLondon Canal Museum.
Manheru Tea muLondon Nevana
London Late Night Museums uye Galleries
Metro Silver Line: Mepu - Dulles Metrorail Extension
The Best Gelato Shops muRoma
Made Made Made Easy - Online Rail Travel Accessibility Guide
Kudzokorora kweEl San Juan Resort neCasino
Mukati meAtlanta: Citizen Supply's Phil Sanders
Toronto Aeropuertos and Airports near Harare
8 Misha Nezvivako Zvokushanya Pedyo neRucca Tuscany
Carnival Magic yeCarnival Cruises - Facts uye Statistics
Nhoroondo yeNational Mall muWashington DC